फोटो पत्रकारले पत्ता लगाए यो तालको पानी किन र कसरी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस के रहेछ यो बाँधको रहस्य? – TAJA KHAWAR
फोटो पत्रकारले पत्ता लगाए यो तालको पानी किन र कसरी कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस के रहेछ यो बाँधको रहस्य?
October 23, 2018 Taja Khawar एजेन्सी 0
एजेन्सी । एक फोटोग्राफरले ड्रोन क्यामेरा मार्फत तस्वीर लिइरहेका थिए, तब उनको नजर एक रहस्यमय बाँधमा पर्यो। उनले उक्त स्थानमा ड्रोन लिएर थुप्रै तस्वीरहरु खिचे । घटना सेन फ्रान्सिस्कोस्थित मोन्टकिलो भन्ने बाँधको हो। जसमा बेरेसा ताल जोडिएको छ। सन् १९५० मा बनेको यो बाँधले उत्तर क्षेत्रमा विजुली र सिंचाइँ दिने गरेको थियो। तर कसैलाई पनि थाहा थिएन की यसको बीचमा निकै ठूलो रहस्य लुकेको छ।
इवान किलकस नामका फोटोग्राफरले यसकैको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे। इवानले तस्वीर देखाएर उक्त रहस्यका बारेमा सोधपुछ गरे तर कसैलाई यसका बारेमा थाहा थिएन्। त्यसपछि इवान यो विषयमा चिन्तित देखिए। किनकी यस बाँध भित्रको खाल्डोले तिब्र रुपमा पानी खिचेर लग्ने गर्दथ्यो। तर उक्त पानी कहाँ जान्छ भन्ने बारे कसैलाई थाहा थिएन्। यसै कारणले यस क्षेत्र १० वर्षदेखि सुख्खा रहेको थियो। यस रहस्यलाई इवानले सुल्झाउने निर्णय गरे।
इवानले त्यसपछि उक्त खाडलका बारेमा पूरै जानकारी जुटाए। यस रहस्यका बारेमा जानकारी पाउनका लागि उनले बाँधमाथि दर्जनौँ ड्रोन उडाउन सुरु गरे। त्यसपछि बाँधका अधिकारीलाई यसको जानकारी प्राप्त भयो। बाँधका एक पुराना अधिकारीले इवानलाई यस बाँधमा भएको खाल्डोको रहस्य बताए। उनका अनुसार उक्त खाल्डो तब बनेको थियो, जब उक्त बाँधको निर्माण भएको थियो। उक्त खाल्डो बाँधको उचाई बराबर रहेको थियो। जसबाट धेरै पानी हुँदा पानी गेटबाट निस्किनुको साटो उक्त खाल्डोबाट आसपासका तलाउहरुमा जाने गर्दथ्यो।
१० वर्षदेखि उक्त स्थानमा सुख्खा हुनुको कारण पनि यही थियो। यही कारण बाँध कहिलै भरिएन र १० वर्षदेखि खडेरी लाग्यो। तर पनि कसैको ध्यान उक्त बाँधमा भएको खाल्डोमा परेको थिएन।
सडक फराकिलो भएपछी नारायणगढ–मुग्लिन खण्डमा सडक थप भासिदै, केके हुँदै छ?
प्रदेश नम्बर दुइका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रचण्डको आयो यस्तो चेतावनी दुर्घटना हुने नै हो त?